Umenzi we-PTO SHAFT, umthengisi, umenzi-mveliso, izixhobo zokunciphisa iintshulube, iibhokisi zeentshulube, iibhokisi zeeplanethi, izinciphisi zesantya, iiyantlukwano, iigeyithi zentsimbi, iigeri zentsimbi, iigiya zebhokisi yezolimo, iigiya zeetrektara, iigi zeelori, iibhokisi zebhokisi
Ngaba ujonga umthombo othembekileyo wee-PTO drive system? Kwi-HZPT, siya kubonelela ngayo yonke into oyifunayo ukukhulisa ukusebenza kweetrektara kunye nezixhobo zefama. Sine-60,000 yeziko lokusasaza iinyawo ezikwere ezigcina iindawo ezahlukeneyo ze-PTO shaft ezivela kubavelisi abaphezulu kolu shishino. Uluhlu lwethu olubanzi lweempahla lusenza ukuba sikwazi ukubonelela ngezi mveliso ngamaxabiso aphantsi.
Xa ubrawuza ukhetho lwethu lwamalungu e-PTO, uya kufumana yonke into ukusuka kwiidyokhwe kunye ne-shafts ukuya kwiinkqubo zokuhambisa kunye nezinti. Ukuba awuqinisekanga ukuba yeyiphi imveliso elungele izixhobo zakho, nceda usazise. Iqela lethu elinolwazi linokukhomba kwicala elifanelekileyo.
Umzi mveliso weShaft
I-Drcuk driveline / Transmission shaft yeTraki
Umzi mveliso Umsebenzi onzima weShaft (ILP)
IPHEPHA LOKUQHAWULA I-PTO
Spline shaft kunye nezixhobo zeShaft